Moderaterna oo dawladda ashkateeysay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Moderaterna oo dawladda ashkateeysay
La daabacay måndag 15 februari 2016 kl 14.00
Xisbiga moderaterna ayaa doonaya in ay cadaadis weyn saaran dawladda waddanka hogaamisa. Moderaterna ayaa dhowr jeer xisbiyadda waddanka hogaamiya socialdemokraterna iyo miljöpartiet gudiga dastuurka ka ashkateysay.
30 jeer ayey moderaterna sannadkii ina soo dhaafay dawladda halkaas ka ashkateysay, tirodan ayaa labalaabantay marka loo barbardhigo sannadkii hore. Ra´iisal wassaare Stefan Löfven ayaa ah skakhsiga ashkatooyinka ugu badan laga gudbiyay, 13 jeer.
-Sababta ayaa ah in ay moderaterna doonayso in ay dawlada tusto awooda ay leeyehiin. Ta kale ayaa ah in xubnaha xisbigani ka soo hor jeedan dhowr go´aan ay moderaterna ku taageertay dawladda, ayuu sheegay Tommy Möller oo cilmiga bulshadda ku takhasuusay.